Saudia, Emirates, Etihad Airways nendege kuenda kuJamaica - Yekushanya Revolution?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Saudia, Emirates, Etihad Airways nendege dzinoenda kuJamaica - Yekushanya Revolution?
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Saudia, Emirates, Etihad Airways nendege dzinoenda kuJamaica - Yekushanya Revolution?
Shanduko yekushanya iri mukugadzirwa nendege nyowani dzinogona kuenda kuJamaica. Ndege kubva kuDubai kuenda kuM Montego Bay kana Kingston kuEmirates, kubva kuAud Dhabi paEtihad, kana ndege kubva kuJeddah kana Riad kuenda kuJamaica kuSaudia?
Ndege dzakadai dzinogona kugadzirwa kuti dzibatanidze kubva kuJamaica kuenda kuBahamas, St. Minister Bartlett vanobva kuJamaica naAhmed Al Khateeb vekuSaudi Arabia vari kubika chinhu chikuru.
Jamaica inogona kuve nhandare yendege yeCaribbean inosangana nemisika mitsva inosanganisira iyo United Arab Emirates, kana Saudi Arabia.
Humambo hweSaudi Arabia hwatova nzvimbo inoshamisira yekushanya pasirese. Nerubatsiro diki, Jamaica inogona kunge iri munzira yekuve nzvimbo yekuCaribbean Tourism.
Saudi Arabia ine mari nekubatana. Jamaica inoonekwa seyepasirese yekushanya maitiro setter. Kubatana kutsva kwekukunda kuri mukugadzirwa, uye pamwe nekukurumidza.
Shanduko Bob Marley maitiro anogona kunge akaita zvemashiripiti. Nguva nyowani yemukana wekushanya wakangotanga muJamaica, apo Gurukota rezveKushanya kuHumambo hweSaudi Arabia HE Ahmed Al Khateeb akaonekwa aine muenzi wake, Gurukota Rezvekushanya kuJamaica, HE Edmund Bartlett. Vafundisi vese vaive vakapfeka ngowani ye baseball inoratidza "Chimurenga."
Yekushanya uye Yekushanya shanduko, Bob Marley maitiro? Saudi neJamaica Gurukota Rezvekushanya vane chiratidzo.
Saudi Arabia yave nzvimbo inopisa yekushanya kwepasirese. UNWTO yakavhura dzimbahwe remunharaunda muSaudi Arabia, ndizvo zvakaitawo WTTC uye Global Resilience & Crisis Management Center inogona kutevera.
Inozivikanwa nekugara uchifunga kunze kwebhokisi uye uine wepasirese kufunga iyo Gurukota rezvekushanya kuJamaica, iye Hon. Edmund Bartlett akaonekwa achinyemwerera paakasangana naiye Akanaka Ahmed Al Khateeb Gurukota rezveKushanya kuHumambo hweSaudi Arabia. Gurukota reSaudi raive muJamaica kumusangano uchangopera 66th wedunhu reWorld Tourism Organisation.
Uyu waive mukana wekukurukura nezve mukana weiyi yekubatanidza mweya pakati peCaribbean neGulf nharaunda. Iyi yekudyidzana yemhepo ingave mukana weJamaica nedzimwe nzvimbo dzeCaribbean kumisikidza isati yamboonekwa mukana wekubatanidza Middle East, India, Africa, Asia neakananga emhepo zvinongedzo kuCaribbean. Jamaica inogona kuve nhandare yendege ine ndege dzinofudza kubva kune dzimwe nyika dzeCaribbean kuti dzibatanidze.
Izvi hazvingogadziri chete misika mitsva yeCaribbean, asi zvakare inowedzera kubatana pakati pezvitsuwa nyika.
Barlett akataura nezve musangano wake negurukota reSaudi: “Takataura nezvekubatana kwemhepo uye nekubatanidza Middle East, musika weAsia, nenzvimbo dziri kudivi iro repasi. Takataura nezve mega ndege dziri munzvimbo idzodzo. Kunyanya Etihad, Emirates uye Saudi Arabia Airlines. ”
Nekuda kweizvozvo Humambo hweSaudi Arabia neJamaica dzakasaina chibvumirano chekufunga. Izvi zvakataurwa na eTurboNews Chishanu.
Chinwiwa (hapana doro)
"Chibvumirano icho Gurukota Al Khateeb richaunza patafura ndevaya vanobatana zvikuru nendege, ini ndichave nebasa rekubatana nenyika dzirikubatana nesu muhurongwa hwekushanya kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kugonesa Hub. Kuve nenzvimbo yakadaro muJamaica traffic inogona kufamba ichibva kuMiddle East ichiuya munzvimbo yedu yozogoverwa kubva kune imwe nyika kuenda kune inotevera, ”akawedzera.
Bartlett anofunga kuti iyi nzira yekuenda kunzvimbo dzakasiyana yakakosha mukusimudzirwa kwekushanya mudunhu uye ichawedzera musika kuti ugadzire huwandu hwakakosha hunodiwa kukwezva ndege huru uye vashanyi vakuru vekushanya kuti vafarire Jamaica nedunhu.
Izvo hazvisi zvekubatana chete nemhepo kubva pamasuwo muAFA, kana Saudi Arabia kuenda kuJamaica. Ndiyo mikana yekufambisa ndege kubva kuIndia, Africa, Central neSouth East Asia kuburikidza neGedhi regedhi kuenda kuCaribbean usingatombonetsekana nemitemo yakasimba yeUS visa.
Jamaica inogona kuve yekushanya uye yepasirese bhizinesi hub yenharaunda yeCaribbean.
“Kwatiri, uyu ndiye anochinja mutambo nekuti nyika diki dzakaita seJamaica hadzifi dzakakwanisa kuva nendege hombe dzakaita seEmirates Airlines kana Saudia kuuya kwatiri nendege dzakananga. Zvisinei, tinogona kubatsirwa nendege idzi dzinouya munzvimbo yeCaribbean, dzichimhara muno muJamaica asi dzichipararira kune dzimwe nyika dzemudunhu iri, ”akatsanangura.
Timu yekunwa uye yekutamba yekupedzisira
Al Khateeb, yaive zvakare yakasimba pakusimbisa kubatana pakati peMiddle East neCaribbean.
Gurukota reSaudi rakati muJamaica: “Takakurukura nevamwe vangu nyaya dzakakomba uye tiri kutsigira kugadzira mabhiriji pakati peMiddle East neCaribbean. Ndinotenda Gurukota Bartlett nemukana uno uye ndinotarisira kuwedzera mubatanidzwa wekuwedzera Middle East neCaribbean, ”akadaro.
Makurukota maviri aya akakurukurawo dzimwe nzvimbo dzekudyidzana, kusanganisira kusimudzira hupfumi hwevanhu, kushanya munharaunda pamwe nekuvaka kusimba mukati medunhu iri.
Bartlett akatsanangura kuti: "Imwe yenzvimbo dzakakosha dzatakakurukura kwaive kusimudzira kusimudzira uye kugadzirisa matambudziko, pamwe nekusimudzira sembiru dzakakosha idzo kufambiswa kwekushanyirwa kunofanirwa kutarisirwa. Asi zvakanyanya kudaro, kukosha kwekuvaka kugona mukati memunyika dzine ushanyi semutyairi wehupfumi hwadzo - nyika dzakashomeka zviine hunyanzvi uye dziri panjodzi yekukanganiswa. Tiri kuzoona kubatana muchivakwa kunze kwenzvimbo yekushinga muno muJamaica nenzvimbo yekusimbisa iri kuSaudi Arabia, "akadaro Bartlett.
Parizvino hapana nguva yenguva pane aya mazano, asi zvirokwazvo kushanya kuri kuenda kumberi muJamaica nekupfuura - uye zvinogona kunge zvisiri chete nevashanyi veNorth America neUK chete.
Ona iyo yakakosha pikicha album tinya pane kurodha pasi Download PDF